Sharci dejiyayaal ka tirsan Midowga Yurub ayaa warqad u diray madaxa Amazon oo weydiiyey sida… – Hagaag.com
Sharci dejiyayaal ka tirsan Midowga Yurub ayaa warqad u diray madaxa Amazon oo weydiiyey sida…
Posted on 8 Oktoobar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Sharci dejiyeyaasha Midowga Yurub ayaa waxay warqad u qoreen madaxa shirkada Amazon Jeff Bezos oo ay ku weydiiyeen in shirkadiisa ay shaqaaleyso wakiilo sirdoon ah si ay u basaasaan siyaasiyiinta, ururada shaqaalaha iyo shaqaalaha, sida lagu sheegay warbixin shabakda CNBC.
Warqada waxaa qortay Leila Chaibi, oo ah siyaasi Faransiis ah kana socota xisbiga “La France Insoumise”, waxaana warqada kadib saxiixay 36 xildhibaan, oo ah xubno katirsan baarlamaanka Yurub kana socda xisbiyada bidix iyo cagaarka inta badan Midowga Yurub.
“Waxaan la yaabanahay ujeedooyinkaaga oo walaac weyn na geliyey: Nidaamka dabagalka ee Amazon ma si ula kac ah ayaa loogu bartilmaameedsadaa midowga shaqaalaha, shaqaalaha Amazon, iyo sidoo kale wakiillada siyaasadeed (annaga oo aan ku jirno) ee laga yaabo inay dhaleeceeyaan howlahooda?”
Warqadda ayaa timid ka dib markii shirkadda Amazon ay ka saartay xayeysiin laba shaqo oo “falanqeeyayaasha sirdoonka ah” oo leh xirfado ku dayasho mudan oo ku hadla luqadaha Faransiiska iyo Isbaanishka. Sida ku cad qoraalada shaqada, shaqooyinka waxaa ka mid ahaa la socoshada hanjabaadaha kala duwan ee ay u aragto Amazon, oo ay ka mid yihiin: ururada shaqaalaha iyo “hogaamiyaasha siyaasada ee cadaawada ku ah.”
“Waxaan ka walaacsanahay suurtagalnimada ururada shaqaalaha ee Yurub, iyo sidoo kale wakiilo maxalli ah, heer qaran ama wakiillo la soo doortay oo reer Yurub ah, inay saameyn ku yeelato qaabkan la socoshada hanjabaadaha ee loola jeedo cabudhinta ficil wadareedka iyo abaabulka ururada shaqaalaha,” ayaa lagu yiri warqadda.
Haddii la magacaabo, falanqeeyayaasha waxaa loo xilsaari doonaa inay soo ururiyaan macluumaadka wixii khatar ah ee gudaha iyo dibedda ah ee ku saabsan Amazon iyo inay u soo sheegaan xogta hoggaamiyeyaasha guud ee ururka.
Xayeysiisyada shaqo ayaa lagu sheegay in falanqeeyayaasha loo xilsaari doono aruurinta sirdoonka “mowduucyo xasaasi ah oo heer sir oo sare ah, oo ay ku jiraan hanjabaadaha abaabulka shaqo oo ka dhan ah shirkadda,” iyo “maalgelinta iyo howlaha la xiriira ololayaasha shirkadda (gudaha iyo dibaddaba) ee ka dhanka ah Amazon,” marka lagu daro warbixinno ku saabsan “xaaladaha firfircoon.” oo ka mid ah mudaaharaadyada, xiisadaha siyaasadeed, iyo mowduucyada kale ee “xasaasiga ah ee shaqaalaha iyo xiriirka shaqaalaha”.
Afhayeen u hadlay shirkada ayaa u sheegay CNBC, “Xaysiiska shaqadu ma ahayn sharaxaad sax ah oo ku saabsan doorka. Waxaa loo sameeyay si qalad ah, waana la saxay waqtigaas.”
Ururada shaqaalaha ayaa usbuucii la soo dhaafay sheegay in Guddiga Yurub, qeybta fulinta ee Midowga Yurub, ay qasab ku tahay inay baaraan sharcinimada kormeerka Amazon ee shaqaalaha.